ईश्वर श्रीमान् कस्सिएपछि... - bampijhyala.com
Home > समाचार > राजनिती > ईश्वर श्रीमान् कस्सिएपछि…
ईश्वर श्रीमान् कस्सिएपछि…
३० असार २०७८, बुधबार ०८:१० bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । सोमबार सर्वोच्च अदालतबाट आएको बहुचर्चित १६७ पेजको फैसला लेख्ने न्यायाधीश थिए, ईश्वर खतिवडा । प्रश्न उठ्छ, स्वयं प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक इजलाशको फैसला किन उनीभन्दा मुनिका न्यायाधीशलाई लेख्न दिइयो ? यसको जवाफ हो, खतिवडाको निडरपन । उनी कोही, कसैको डर र प्रलोभनमा नपरी राम्रो फैसला लेख्ने, आफैँ टाइप गर्ने र छिटो फैसला तयार पार्ने न्यायाधीशका रुपमा चिनिन्छन् । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा रहेछ, निर्भिक कार्यशैली । ०५२ सालताका सिन्धुली जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुँदा सरकारले डाँका मुद्दाका एकजना प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो ।
त्यसबेलाको कानुनअनुसार त्यस्ता मुद्दा सरकारले मात्रै फिर्ता लिएर पुग्दैन, शुरु अदालतले निस्सा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, जिल्ला अदालतबाट शुरु भएको उक्त मुद्दाका ती प्रतिवादीलाई न्यायाधीशका हैसियतले ईश्वरले सदर गएनन् । उनले ‘सरकारको निर्णयअनुसार मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने’ राय दिएपछि अभियुक्तले उन्मुक्ति पाएनन् ।
पछिल्लोपटकको संसद विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिट ईश्वरकै बेञ्चमा राखिएको थियो । अन्तरिम आदेश माग गरिएको उक्त मुद्दामा उनले त्यस्तो आदेश दिएनन्, दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो । शायद, संवैधानिक इजलाशमा भएर पनि होला उनले हाट्टहुट्ट नगरेको । पछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाले नियुक्ति नै बदर गरिदिए । जनआस्था साप्ताहिकबाट
हजुरको आजको दिन, २०७८ असार ३० गते बुधवार, १४ जुलाई २०२१
आईजीपीको प्रस्तावले सशस्त्रमा हङ्गामा ३० असार २०७८, बुधबार ०८:१०
माइक्रो फाइनान्स समूहको सूचक २ दशमलव २२ प्रतिशतले बढ्दा ३० असार २०७८, बुधबार ०८:१०
के होला कक्षा १२ को परीक्षा ? ३० असार २०७८, बुधबार ०८:१०
हजुरको आजको दिन, २०७८ साउन १९ गते, मंगलवार, ३ अगस्ट २०२१ ३० असार २०७८, बुधबार ०८:१०
३२ औं गृष्मकालीन ओलम्पिकमा चीनको अग्रता कायमै ३० असार २०७८, बुधबार ०८:१०